Puree legioma sy trondro - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Thermomix Recipe Book
Resipeo momba ny tsindrin-tsakafo miaraka amin'ny Thermomix
Fahandroana mahasalama amin'ny Thermomix
Express resipe miaraka amin'ny Thermomix
Express resipe 2 miaraka amin'ny Thermomix
Resipeo manokana miaraka amin'ny Thermomix
Boky firaisankina fanaovana bilaogy sy fandrahoan-tsakafo
Vary sy Pasta
Misotro sy ranona
Salady sy legioma
Arina sy mofo
Jams ary mitahiry
Lasopy sy menaka
Recipe tsy misy Thermomix
Tsy mahazaka laktose
Tsy mahazaka atody
Ho an'ny ankizy
Ho an'ny fotoana
Latsaky ny 15 minitra
Latsaky ny 30 minitra
Latsaky ny adiny 1
Latsaky ny adiny 1 sy 30 min
Mihoatra ny adiny 1 sy 30 min
Inona no atao hoe Thermomix?
Vidio Thermomix TM5
Fitoviana TM5, TM31 ary TM21
Hiditra o Hiditra Mpikambana ary mankafy ThermoRecipes
Puree legioma sy trondro
ny Silvia Benito
Ity dia fomba fahandro izay matetika no nataoko hatramin'ny nahazoako ny dwarf. A legioma nopotsehina de fanombohana ny famahanana amin'ny zaza tena feno sy mahavelona.
Mbola tadidiko ny mash aloha inona no nataoko tamin'ny lahimatoako ... o! Zara raha nandatsaka rano taminy aho ary matevina loatra ka tsy haiko hoe ahoana no ahafahany mitelina azy, saingy nanao izany izy. Dia nomen-dreniko ahy ilay boky Fihinanan-jaza amin'ny Thermomix® ary niova ny zava-drehetra.
Saika ny puree rehetra no ataoko ao amin'ilay boky ary tian'izy rehetra izy ireo. Na dia ity iray androany ity aza dia fitambaran'ny legioma izay mazàna no ataoko betsaka miaraka amin'ny trondro toy ny amin'ny akoho na omby ary mivoaka matsiro.
1 Puree legioma sy trondro
Tehirizo ity fomba fahandro ity
Midira azafady mba hamonjy
Puree starter ho an'ny ankizy… fa tsy ny zaza !!
Fotoana hiketrehana: 45M
Fotoana manontolo: 45M
Poakaty 100 g
Karaoty 100 g
150 g ovy
100 g ny zucchini
Tsaramaso maitso 80g
30 g ny menaka oliva virjiny fanampiny
60 g sarda
Voatabia masaka 1
1/2 sotrokely sira
Rano 450 g
Isika aloha dia manomana ny legioma rehetra, manasa azy ary manapaka azy ho tapatapaka.
Napetrakay tao anaty vera ny boka, ny karaoty, ny ovy ary ny zucchini. Izahay dia manao fandaharana 6 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 5. Ampianay ny solika sy ny programa 8 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Ampio ny tsaramaso, voatabia ary chard. Sauté 3 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Ampianay ny sira sy ny rano. Izahay dia manao fandaharana 10 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Rehefa mandeha ny fotoana dia ampidirinay ny valahan'ny hake, fandaharana 20 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Amin'ny farany dia avelantsika hitroatra kely izy mandritra ny minitra vitsivitsy ary hikosoka 1 minitra, hafainganana 5.
Avy eo hamelana azy amin'ny endriny tena tsara dia manao programa hafa izahay 3 minitra amin'ny hafainganam-pandeha 9.
Fanazavana fanampiny - Puree legioma nentim-paharazana
Ampifanaraho amin'ny maodely Thermomix® ity fomba fahandro ity
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny adiny 1, TRONDRO, Resipeo ho an'ny ankizy, Lasopy sy menaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Recipe manokana » Celiac » Puree legioma sy trondro
41 hevitra, avelao ny anao
Raiso ireo resipeo ao amin'ny mailako
Joaquin dia hoy izy:
hace 12 taona
Tena matsiro tokoa ity puree ity….?
Raha izany no izy, ny zanako vavy tsy mba manandrana azy akory, fa raha tsy izany dia fomba tsara hihinanany trondro.
Lazao amiko zavatra tsara?
Mamaly an'i joaquin
Elena Calderon dia hoy izy:
Joaquin, manana fifangaroana tsiro tonga lafatra ianao. Tsy manandrana trondro be loatra izy io. Andramo ary raha tsy tian'ny zanakao vavy izany, manandrama manisy trondro kely. Fa heveriko fa ho tianao toy izany. Lazao aminay. Mirary ny soa indrindra.
Valiny tamin'i Elena Calderón
Noelia dia hoy izy:
Misaotra Silvia !!! Ny ahy dia efa antitra, saika izy telo mianadahy, fa amin'ny sakafo hariva dia misy legioma foana ary indraindray ao amin'ny Pure, amin'ity herinandro ity dia milatsaka azo antoka ary tsy tokony homeko ilay hake. Ireo avy amin'ny Zaza Sakafo tiany, ilay tena jamban'ny Jamon Serrano indrindra !!!!
Famihinana sy fisaorana noho ny resinao !!
Mamaly an'i Noelia
Sheila dia hoy izy:
LEHIBE IANAO, MANDEHA ROA !!! MAHAFINARITRA AHY IANAO! INDRINDRA INDRINDRA NY RESITRA TSARA ARY, NA INDRINDRA NY MPIARAKA MANOMBOKA TIA NY BLOGO ANAO, hahaha. TE HANGATAKA ANAO ... INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRAO ATAO IZAO REHETRA IZAO? TSY MISY INDRINDRA AMIN'ILAY REHETRA? IZAO NO MIVOATRA VOLA VOLA SOA ... ARY TAMIN'IZANY, SADY TSY TE HANOHITRA NY SITSY, MIVOAKA BE TANTERAKA ... TSY MISY VOLA. TSY FANTATRAO INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA AZO ATAO mba hanomezana azy io ho fikolokoloana matsiro kokoa.
MANKASITRAKA ZANAKELY ARY MANDROSO NY BLOG !!! LEHIBE IZANY ARY MBOLA MANAMPY INDRINDRA AZO KOA IZAO ...
FIOMPIANA AVY AMIN'NY JAÉN
Valiny amin'i SHEILA
Misaotra betsaka, Sheila. Amin'ireto fanehoan-kevitra ireto dia mamporisika anay hanohy amin'ny fomba fahandro izahay.
Mikasika ny trondro dia tsy tiako afa-tsy amin'ny sira sy vovoka tongolo kely. Ny marina dia ny persil sy tongolo lay ary sira ihany no ampiko.
Pilar dia hoy izy:
Raha tianao ny trondro steamed, rehefa avy nandrahoina sy amin'ny volafotsy ianao, dia afaka manampy crème vinaingitra kely.
Ataoko sotroina foana ilay trondro, nasiako ravinkazo karaoty sy ovy steamed sasany, andramo dia holazainao amiko
Valiny tamin'i Pilar
Tsara toy inona, Pilar!. Hoporofoiko izany. Misaotra betsaka.
ARY dia hoy izy:
Salama !! Tiako ianao hanampy ahy, jereo, efa nataoko indroa ny fomba fanamboarana chard misy ovy ary mivoaka madio izy ireo, manana ny faha-21 aho.
Valio amin'i ARY
Mivoaka amin'ny sombin-javatra kely izy ireo nefa tsy madio, tsy maintsy ataonao izay hametrahana ny hafainganan'ny sotro ary hivily miankavia, fa marina raha roa minitra alohan'ny hamaranana dia ampio karazana fromazy sandwich roa karazana izy ireo matsiro
Silvia Benito dia hoy izy:
Pilar Tsy azoko tsara ny hevitrao, satria raha te-hanao puree dia tsy mila mametraka hafainganam-pandrefesana ianao na hivily miankavia. Torotoroy amin'ny faran'ny hafainganam-pandeha 5-10 ary tonga lafatra izy.
Valiny tamin'i Silvia Benito
naty dia hoy izy:
tsara tokoa ny endriny, rahampitso dia hanomana azy ho an'ny zanako vavy aho.
Mamaly an'i naty
Tena mahatahotra i Naty, azoko antoka fa tian'ny zanakareo kely izany, ankafizin'ny zanako vavy.
almudena dia hoy izy:
Salama zazavavy, manampy ahy be dia be ianao, herinandro fotsiny no ananako ilay thermomix ary toy ny zaza manana kiraro vaovao aho, oroka
Valio i almudena
Misaotra betsaka Almudena, izany no tanjon'ity tetik'asa ity, hizara ny traikefan'ny thermomiser rehetra anay ary hampanan-karena anay ny hevitrao.
Miarahaba sy misaotra anao tonga teo.
Tongasoa, Almudena!. Manantena aho fa tianao ny resinay ary manampy anao amin'ny fampiasana tsara indrindra ny Thermomix izy ireo. Mirary ny soa indrindra.
Victoria dia hoy izy:
Salama, te hahafantatra aho raha azo ampidirina mivantana ireo fonosana hake mangatsiaka na tokony esorina ao anaty ala aloha
Valiny tamin'i Victoria
Victoria dia azonao atsipy mivantana izy ireo. Atsipiko toy izao izy ireo ary tonga lafatra.
tsangam-bato dia hoy izy:
Silvia, azafady, nieritreritra aho fa tsy tianao ny notorotoroina, tsy notorotoroiko ity fomba fahandro ity, aleoko kokoa mahita ireo stumps
Mamaly an'i pilar
Pilar Torotoroiko io satria manasa azy ho an'ny zanako vavy kely aho, nefa tiako kokoa ihany koa amin'ny ankapobeny.
Misaotra sy niarahaba
manga dia hoy izy:
Salama Silvia tiako ny resinao rehetra ary manampy anao betsaka amin'ny fandaminana ny menio ao anatin'ny herinandro ianao. Te hanontany anao aho hoe aiza no hametrahanao ny hevitry ny vnilos. Hiezaka handray anjara aho ary raha tsy izany dia hanontany azy aho. It dia tena tany am-boalohany ary manome fikitika hafa amin'ny thermomix.
Valiny tamin'i Mavi
Mavi avelao ny hevitrao amin'ny faran'ny lahatsoratra vinyl. Misaotra nanaraka anay.
Salama Mavi, tsy maintsy mametraka ny fanehoan-kevitra ianao amin'ny lahatsoratra "Haingo ny Thermomix anao amin'ny vinyls", izany hoe, tahaka ny nametrahanao an'io hevitra io tao amin'ny recipe ho an'ny puree, dia mametraka ny hevitrao amin'ity publication navoakantsika androany ity. Raha manana olana ianao dia ampahafantaro anay. Mirary anao ho tsara vintana.
Isabel dia hoy izy:
Salama e! Ity puree ity dia tsara, na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe.
Valiny tamin'i Isabel
Misaotra Isabel, faly aho fa tianao izany. Mirary ny soa indrindra
Sonia dia hoy izy:
hace 11 taona
Salama zazavavy, tsy maintsy milaza aminao aho fa nanomboka velona ny thermomix anao. Volana vitsy lasa izay ny vadiko dia nanome ahy ahy rehefa avy nanitrikitrika nandritra ny taona maro ary rehefa nanana aho dia tsy nanomboka nanao resipeo mandra-pahitako anao mijery anao. Fanampiana lehibe tokoa ianao, azafady, aza avela hiditra amin'ireo zazavavikely toa ahy, FANONTANIANA: ahoana no hataoko amin'ny antsasaky ny habetsahana, mampihena ny fotoana? Manana zazavavy kely 2 taona aho ary ny puree sy ny menaka dia ho azy sy ho ahy, toa izany koa no hatao amin'ny puree hafa?
Mamaly an'i sonia
Sonia, azonao atao ny mampihena ny habetsany, saingy ny fotoana dia mitovy ho azy ireo mba hanaovana. Na eo aza izany dia manana zaza kely 2 aho ary indraindray koa mihinana sy manao an'io vola io, indroa eo ho eo no anananao ary raha tsy azonao atao ny manala azy. Mahafinaritra ahy ny manao izany vola rehetra izany indray mandeha. Andramo ary lazao ahy.
Salama, misaotra tamin'ny resipeo, ahoana no hampihenako ny vola ho an'ny olona roa?
Tapaho ny antsasaky ny vola fa tazomy mitovy ny fotoana.
Misaotra betsaka, tiako ianao !!!
Maria Angeles dia hoy izy:
Salama, manamboatra fomba fahandro mahafinaritra ianao. Faly aho fa nahita ity bilaogy ity, satria na dia efa 3 taona na mihoatra kely aza ny thermomix dia mbola tsy ampy traikefa ihany aho satria kely dia kely no ampiasako azy. Te hahafantatra aho raha azo atao mangatsiaka ny tsaramaso maintso, satria ireny no ampiasako matetika satria tsy voafidy vaovao, toy ny chard. Manantena aho fa hanampy ahy hisaotra anao aho. Arahabaina betsaka ao amin'ny bilaogy. mandra-pihaona.
Mamaly an'i Mª Angeles
Mª Angeles tsy manana olana amin'ny fampiasana legioma mangatsiaka ianao. Ampiasaiko imbetsaka izy ireo ary mivoaka tsara toy izany koa.
Misaotra betsaka, fa tsy maintsy esoriko aloha izy ireo na apetrako ao anaty vera mivantana. oroka
HELLO, SILVIA ARY I ELENA IHANY IZAO NO NANAMORANA NY MAZAVA, IZANY AMIN'NY FARANY IZAO NO NATAO IZAO AMIN'NY VONOMBONY SY NY ACCELGAS FRESH, SATRIA NY RANO-RENINOO dia nanazava tamiko ny fomba fiomanana. EFA NANANARANA ANAO IZAO ARY NY VADIKO IHANY ARY TENA TENA NITIA ANTSIKA. MANKASITRAKA EO AMIN'NY REHETRA REHETRA, FIARAHAM-PANJAKANA HO AN'NY BLOC ANAO, Mieritreritra aho fa mbola hanao be dia be ny olona ary HAHAZO NY FOMBA FANAMPINY ALOHA TSY MBOLA NAHITA TAMIN'NY THERMOMIX, Araho tahaka ireto zazavavy ireto.
MªAngeles Faly aho fa tianao izany ary noho izany dia entanina ianao hampiasa ny thermomix isan'andro.
Paka dia hoy izy:
Mifanohitra amin'ny trondro aho, hee hee hee ... fa efa nanandrana an'ity crème ity aho ary tiako !! misaotra anao nametraka recette manan-karena sy matsiro.
Valiny tamin'i Pascu
Faly aho fa tianao ny fomba fanamboarana toy ireny. Ny tena marina dia fomba fahandro mahomby hanentanana antsika hihinana trondro bebe kokoa.
Susana dia hoy izy:
Salama, arahabaina aloha ny momba ny resinao ary ny faharoa mangataka anao hamoaka na hilaza amiko hoe aiza no ahitako fomba fahandro ho an'ny purees an'ny zaza. Misaotra
Mamaly an'i susana
Susana, ity no puree nataoko tamin'ny zanako vavy hatramin'ny naha zazakely azy ireo ary tena tianay izany fa tohin-tsakafo eo amin'ny sakafom-pianakaviana hatrany. Ataoko amin'ny legioma sy akoho ihany koa, avelako ho anao ny recette ary matetika no ataoko mitovy amin'ny hena, fa manova ny akoho ho hen'omby.
Suzanne dia hoy izy:
Salama, mijery ny bilaoginao isan'andro aho, ato anatin'ireo tiako indrindra io.
Manana fanontaniana amin'ny sarda aho, ny ravinao ihany no ampianao? Misaotra sy arahaba indrindra.
Bel dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao amin'ny resipeo, tsy tsara ho an'ny dwarves ihany io. Narary be ny reniko ankehitriny ary tsy te hihinana, miaraka amin'ireo fomba fahandro ireo no fomba tokana ahazoana azy mihinana.
Valiny tamin'i Bel
Maika dia hoy izy:
hace 10 taona
Salama, tsara be ilay mivoaka. Raha te hampitombo avo roa heny ny vola aho, ankoatry ny fampitomboana avo roa heny ny akora rehetra, tsy maintsy ataoko avo roa heny koa ny fotoana?
Ary raha ny puree legioma fotsiny no tiako hatao mandritra ny hafiriana no hametrahako azy.
Valio amin'i Maika
Voasarimakirana sy gilasy manapaka gilasy
Salady voatabia zaridaina miaraka amin'ny akanjo mitafy sakamalao sy sakamalao
Manohana antsika izy ireo
Lisitry ny mpikambana rehetra
Mpikambana mavitrika tato ho ato
Mofo karaoty sy yaorta
Almogrote gomero na Canarian pâté
Verdinas miaraka am-baody
Thermo be fitiavana
Ahoana ny fomba famoronana bilaogy mahandro
Misoratra anarana amin'ny Thermorecetas
Sintomy ny eBooks misy resipeo tsy miankina